Wasiir Sabriye oo taageero u raadinaya xubno ay gadaal ka riixeyso DFS inay ku biiraan Galmudug | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiir Sabriye oo taageero u raadinaya xubno ay gadaal ka riixeyso DFS...
Wasiir Sabriye oo taageero u raadinaya xubno ay gadaal ka riixeyso DFS inay ku biiraan Galmudug
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye oo booqasho ku joogga Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa uu taageero u raadinaya xubno ay dowladda dooneyso inay ku biiraan Baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay hoteelada Magaalada Muqdisho qaarkood ku uruurineysaa dad ay damacsan tahay in ay gayso Magaalada Dhuusamareeb, si loogu biiriyo Baarlamaanka xigga ee Galmudug.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo kulamo ka wada Magaalada Dhuusamareeb ayaa wuxuu ka shaqaynaya, sidii ay Odayaasha Dhaqanka taageero ugu muujin lahaayen dadka ay dowladdu u waddo inay ka midka noqdaan Baarlamaanka Galmudug.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Wasiirka Arrimaha Gudaha uu Odayaasha Dhaqanka u samaynayo ballanqaad maaliyadeed iyo in ubadkooda loogu qaadi doono dibadda, waa haddii ay taageerayan xubnahan.
Dhacdo.com ayaa ogaatay in Villa Somalia ay muruq iyo maalba isugu gaynayso, sidii ay ugu yaraan ku heli laheyd laba meelood oo meel, Xildhibaanada lagu soo xulayo Magaalada Dhuusamareeb.
Yoolka siyaasadeed ee Dowladda Federaalka ayaa ah inay Gobolada Dhexe ka hirgeliso mid lamid ah Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed, oo ay hoggaaminayan dad ku shaqeeya rabitaankeeda siyaasadeed.
Ugu dambeyn, waxaa soo xoogeysanaya eedeymaha loo jeedinayo Dowladda Somaliya, ee ku aadan inay baalmartay dhismaha Galmudug la wada leeyahay.
inay ku biiraan
Wasiir Sabriye oo taageero u raadinaya xubno ay wadato dowladda Soomaaliya